Karmalure echibini cottage - I-Airbnb
Karmalure echibini cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMark And Rebecca
UMark And Rebecca yi-Superhost
Indawo engaphambili yechibi, isitayile esitsha saseScandinavia esiqinileyo sendlu yamaplanga. Iimbono ezimangalisayo zepanoramic ezibandakanya iintaba kunye nechibi.
Ukuzimela ngekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Ibekwe nje malunga neemitha ezili-15 ukusuka kumkhondo wokuhamba / umjikelo kunye nomda wechibi.
Indawo yokumisa ibhasi kunye nenkonzo yeeteksi zamanzi umgama nje ongemizuzu emi-2. Ifanelekile ukuhlala kwezothando, ukuzonwabisa ezintabeni okanye ukukhwela ibhayisekile kwiindlela ezininzi ezijikeleze iQueenstown.
Ibekwe kwindawo ekuzo zonke iimfuno zokutya kunye nokuzonwabisa.
Isidlo sakusasa sekiwi selizwekazi. Indawo yokuhlamba impahla kunye nefiber internet/wifi ekhoyo.
4.97 · Izimvo eziyi-121
Ibekwe kakuhle kwingalo yaseFrankton yaseLake Wakatipu. Iziko lokuthenga elimangalisayo liku-2.5km kuphela kude kunye nesikhululo seenqwelomoya esi-2km kude. Ukuhamba umgama ukuya eIndiya, Thai, Chinese, intlanzi kunye neetships kunye nepizza zokutyela. Kwakhona ikhefi ephambi kwechibi, i-tavern yasekhaya kunye ne-brewery yobuchwephesha kukuhamba nje kwemizuzu emi-5 ukuya e-marina.
Umbuki zindwendwe ngu- Mark And Rebecca
UMarko uya kufumaneka ukubulisa iindwendwe ekufikeni, ukuphendula imibuzo kunye nokubonelela ngolwazi oluluncedo ngolwazi lwakhe olubanzi lwendawo. Ngelixa uhlonipha ubumfihlo bakho bubonke, ababuki zindwendwe bahlala kwipropathi kwindlu eyahlukileyo ngokupheleleyo emva kwendlwana.
UMarko uya kufumaneka ukubulisa iindwendwe ekufikeni, ukuphendula imibuzo kunye nokubonelela ngolwazi oluluncedo ngolwazi lwakhe olubanzi lwendawo. Ngelixa uhlonipha ubumfihlo bakh…